Booliiska Pakistan Oo Lagu Eedeyay Inay si Qarsoodi ah U Dileen Nin Looga Shakiyay Kufsi Gabar Lix Jir ah. | Awdalmedia.com
Booliiska Pakistan Oo Lagu Eedeyay Inay si Qarsoodi ah U Dileen Nin Looga Shakiyay Kufsi Gabar Lix Jir ah.
Fri 19 January 2018.
Saraakiisha dalka Pakistan ayaa waxay sheegeen in ay baaritaan ku samayn doonaan eedeeyn ku saabsan in booliiska ay fuliyeen dil qarsoodi ah oo loo gaystay nin si khaldan loogu eedeeyay in uu cunug yar dilay.
Eedaynta oo ay shaaca oo ay ogaatay BBC ayaa waxaa diirada lagu saarayay dhiiga DNA oo muujinaya in qofka dilay dhibanaha uu yahay isla ninka looga shakisan yahay in uu dilay Zainab Ansari oo 6 jir ah lagu dilay Kasur.
Booliiska ayaa waxay beeniyeen eedeeynta, iyaga oo sheegay in ninkan la toogtay ka dib markii uu ka dhaga adeegay in la xiro.
Kufsiga iyo dilka Zainab ayaa wax aka dhashay caro iyo dibadbaxyo guud ahaan Pakistan.
Booliiska oo baaritaan ku haya dilka horraantii bishan loo gaystay Zainab ayaa waxay ogaadeen in DNA ay qaadeen uu yahay midkii laga helay isla qofkii gaystay dilka 7 gabdhood oo yaryar oo isla magaaladaasi lagu dilay.
Dadka la sheegay isla ninkan in uu dilay waxaa ka mid ah Iman Fatima oo 5 jir ahayd oo la afduubtay islamarkana la dilay February 2017 magaalada Kasur.
Ilaa iyo hadda booliiska iyo qoysaska dhibanayaasha ayaa waxay rumaysan yihiin in kiiskan mar hore la xaliyay.
Adeel ayaa BBC u sheegay, "qof afduubtay ayaa waxa uu igu qasbay in aan darbi ku gabado waxa uuna qaatay Iman Fatima,waxa uu kala dagay jaraanjarada, isaga oo ku ritay jawaan lana tagay."
Qoyskiisa ayaa waxay sheegeen in inkastoo uu wiilkan yaraa haddana waxa uu farta ku fiiqay guriga loo qaaday walaashiis ka dib na waxa uu gartay ninkii masuulka ka ahaa.
Ninka looga shakiyay weerarka ayaa ahaa Mudasir, oo 21 jir ah oo ah nin warshad ka shaqeeya kaasi oo magaalada Kasur soo dagay laba sano ka hor.
Ka dib waxa dhacay ayaa ah mid muran badan keenay.
Sida ay booliiska sheegeen Mudasir ayaa la dilay ka dib markii uu ka dhaga adeegay in la xiro.
Sargaal kale oo booliiska ka tirsan ayaa dhankiisa sheegay in xabsiga la geeyay halkaasi oo uu dambiga ku qirtay lana dilay ka dib markii uu "isku dayay in uu baxsado."
Balse qoyska Mudasir waxa ay sheegeen in ay rumaysan yihiin in ay booliiska dileen , iyada oo ay jirto in ay ogaayeen in uusan ahayn qofka dilka gaystay.
Kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa waxay ku eedeeyeen booliiska Pakistan in ay fuliyaan waxa ay dadka dalkaasi u yeeraan"fursadda booliiska" - taasi oo ah dilal qarsoodi ah ka dibna ay booliiska sheegaan in qofka uu ka dhaga adeegay in la xiro.